अजा एकादशीको व्रतकथा - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
यसरी राजाका धेरै वर्ष बिते। एक दिन राजा यस्तै चिंतामा मग्न थिए कि गौतम ऋषि घुम्दाघुम्दै राजाका सामु आई पुगे। राजाले तिनलाई देखेर प्रणाम गरे र आफ्नो संपूर्ण दु:खपूर्ण कथाव्यथा सुनाए। राजाका दुखप्रद वेदना सुनेर गौतम ऋषिलाई दया पलायो अनि उनी राजालाई भन्न थाले- हे राजन ! तिम्रो भाग्यले आजबाट सात दिनपछि भाद्रपद कृष्णपक्षको अजा नामको एकादशी आउने छ, तिमी विधिपूर्वक त्यस दिन व्रत गर। गौतम ऋषिले राजालाई अझ बताए- यस व्रतको पुण्य प्रभावबाट तिम्रा समस्त पाप नष्ट हुनेछन। यसरी राजालाई आज्ञा गरी गौतम ऋषि त्यसै समय अंतर्ध्यान भए। राजाले ऋषिको भनाइबमोजिम एकादशी आएपछि विधिपूर्वक व्रत र जागरण गरे। त्यस व्रतको प्रभावले राजाका समस्त पाप नष्ट भए। स्वर्गमा बाजा बज्न थाले र पुष्पको वर्षा हुन थाल्यो। उनले आफ्ना मृतक पुत्रलाई जीवित र आफ्नी स्त्रीलाई वस्त्र तथा आभूषणद्वारा सुसज्जित देखे। व्रतको प्रभावले राजालाई पुन: राज्य प्राप्ति भयो। अंत्यमा ती आफ्नो परिवार सहित स्वर्ग गए। हे राजन ! यो संपूर्ण चमत्कार अजा एकादशीको प्रभावबाट नै भएको हो। अत: जो मनुष्यले यत्नपूर्वक तथा विधिपूर्वक यस व्रतलाई पालना गर्दै रात्रिको समयमा जागरण गर्दछ, उसका समस्त पाप नष्ट भएर अन्त्यमा ऊ स्वर्गलोक पुग्दछ । यस एकादशीको कथाको श्रवणमात्रले पनि अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ।